Halkee marayaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulanka ay madaxda ka socotay labada dal yeesheen ayaa ka dhacay xafiiska Wasiirka cusub ee Wasaaradda ganacsiga Soomaaliya, halkaasoo uu booqosho ku tagay Safiirka dalka turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmet Yilmaz.
Sida ay daabacday warbaahinta Turkiga, kulanka ayaa looga hadlay, sidii loo dar dar galin lahaa xiriirka labada dal, iyadoo xoogga la saarayo arrimaha ganacsiga iyo amniga.
Wasiirka ganacsiga Cabdisaciid Muuse, ayaa ka dalbaday Safiirka in dowladda Turkiga ay fududeyso, sidii waxyaabaha Soomaaliya soo saarto loo gaarsiin lahaa dalkaasi, maadama si dhib yar Soomaaliya uu ku yimaadi agabyada ay sameyso Turkiga, kuwaasoo badankooda lagu iibiyo suuqyada ku yaalla gudaha Soomaaliya.
Cabdisaciid Muuse ayaa tilmaamay in arrintaasi ay saamaxeyso in labada dal ay noqdaan kuwa ka siman dhanka dheefta ama faa'iidada ganacsiga, oo iminka Soomaalida looga badan yahay.
Safiirka Turkiga ayaa xusay inuu turkiga u gudbin doono tabashada uu wasiirku ka muujiyey arrimaha ganacsiga laba geesoodka ah, isagoo tilmaamay in arrimahaasi sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban doono.
Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageera Soomaaliya, iyadoo ka caawisa dib u dhiska ciidamada, waxana sanad waliba dugsiga tabarbarka ee ay Muqdisho ku leedahay ka aflaxa tiro aad u badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sidda.